Momba anay - Shenzhen UUGreenPower Electrical Co., Ltd.
Shenzhen UUGreenPower Electrical Co., Ltd.manana ekipa matihanina R & D elektronika matihanina, ny mpikambana ao amin'ny R&D fototra izay niasa tao Emerson & Eltek. Izahay dia nanangona traikefa efa ho 20 taona tao amin'ny haitao DC famatsiana herinaratra ary tamin'ny alàlan'ny famolavolana fanavaozana dia afaka namolavola ny andiam-modely faran'izay mahery vaika ao anatin'izany ny 40kW, 30KW, 20KW ary 15KW izay natao manokana ho an'ny paompy faran'izay mahery.
Mifantoka amin'ny singa fototra sy ny vahaolana feno amin'ny familiana fiara mifono herinaratra vaovao izahay. Ary manome maodelim-pahefana maodely tsara izahay, manome modely fanaraha-maso ny antontam-bary ary manainga ny sehatra fandefasana antontam-bato sns.
Amin'izao fotoana izao dia mirehareha ny andian-tsarimihetsika feno indrindra izahay eo amin'ny sehatry ny famahana ny modely herin'ny antontam-bato, ary izahay dia nitana ny andraikitra lehibe indrindra amin'ny lafiny teknolojia sy vokatra. Ny maodelim-pamokarana vokatra 30kW mamaly modely dia be mpampiasa amin'ny tsena anatiny sy ampitan-dranomasina. Ny maodelim-pahefana IP65 miaro amin'ny fiarovana avo lenta sy ny modely famerenam-pahefana mahery 40kW dia havoaka eny an-tsena amin'ny faran'ny 2020.
Amin'ny maha-orinasa teknolojia vaovao angovo vaovao azy, UUGreenPower dia mifantoka amin'ny fanavaozana ny haitao elektronika herinaratra, ary manolo-tena amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, fanamboarana ary ny fivarotana ny singa fototra amin'ny fitaovana avo lenta. Izahay dia manizingizina amin'ny famahana ny teboka fanaintainan'ny mpanjifa, ny fitomboan'ny mpanjifa ary ny fampiroboroboana ny indostrian'ny fiara elektrika miaraka amin'ny angovo maitso sy ny toekarena ambany karbaona.
Amin'izao fotoana izao, ny vokatr'ilay orinasa dia nosedraina sy voamarin'ny State Grid Electric Power Research Institute, mari-pahaizana CE, fanamarinana UL. Ny vokatra dia be mpampiasa eo amin'ny tsena anatiny sy ny tsena any ampitan-dranomasina, ary manana fiaraha-miasa lalina amin'ny mpanjifa avy any Etazonia, Alemana, France, Italia, Korea atsimo, Thailand, ary India.
UUGreenPower dia nandefa ny maodelika famahana 30kW voalohany tamin'ny volana jona 2017. Izy io no mpanamboatra voalohany manana haitao modely 30kW matotra ao amin'ny indostria, ary izy io koa dia iray amin'ireo mpanamboatra modely vitsivitsy ao amin'ny indostria namokatra modely 30kW ary voaporofon'ny fangatahana tsena. Satria ny haavon'ny herin'ny maodelim-pahefana 30KW dia hatramin'ny 45W / in3, avo ny fahombiazan'ny fiovam-po, ny vokatra dia tsara ary miharihary ny tombony amin'ny vidiny, ny modely herinaratra 30kW dia naka haingana ny famaranana haingana sy avo lenta tsena.
UUGreenPower dia hanohy hampitombo ny fampiasam-bolany R & D amin'ny modely famahanana haingam-pandeha haingam-pandeha hazakazaka avo lenta. Ny modely 40kW super power charge ary ny mody fiarovana avo lenta IP65 dia havoaka amin'ny faran'ny taona 2020 izay hanohy hanamafisana ny toeran'ny orinasa eo amin'ny sehatry ny vahaolana mavesatra ary mamoaka vahaolana.